Report: Real Madrid oo wada-hadal heshiis kordhin ah kula jirta Marco Asensio. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Report: Real Madrid oo wada-hadal heshiis kordhin ah kula jirta Marco Asensio.
Report: Real Madrid oo wada-hadal heshiis kordhin ah kula jirta Marco Asensio.
Muqdisho – Real Madrid ayay warku sheegayaan in ay go’aansatay in laacibkeeda Marco Asensio ay kordhiso qandaraska uu kula jiro isla markaana ay kor u qaado qiimaha lacageed ee lagu burburin karo heshiiskiisa.
21 jirkan ayaa shabaqa soo taabtay finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore oo ay kaga guuleysteen Juventus, waxaana labo gool ka dhaliyay Supercopa de Espana kulamadii Barcelona ee bishan.
Paris Saint-Germain, Arsenal iyo Barca ayaa la rumeysan yahay inay ka fiirsanayaan inay u dhaqaaqaan ciyaaryahanka reer Spain, kaasoo qandaraaskiisa haatan lagu burburin karo 72 milyan ginni.
Daily Star ayaa sheeganeysa in Real ay wadahadal la furatay wakiillada Asensio, waxaana ay dooneysaa inay qandaraaska u cusbooneysiiso, heshiiska cusub ee Real ay dooneyso ayaa gaaray 127 milyan ginni in koxdii dooneysa Asensio in ay keento.
Si kastaba, waxaa larumeysan yahay in xiddigan uusan Los Blancos ka heli doonin fursad badan maadaama halkaas ay ku sugan yihiin Cristiano Ronaldo, Gareth Bale and Karim Benzema.
Asensio ayaa kaga soo biiray kooxda Real naadiga Mallorca sanadkii 2014-kii; 41 soo muuqasho ayuuna u sameeyay kooxda.
Previous: Waxay u bixisay kellideeda – wayna guursatay!
Next: Swansea 0 Man United 4: Wiilasha Mourinho oo mar kale guul weyn gaaray.